Kala Hufan Dhibaatooyinka Fiidiyowga iyo Filimyada Lagu Sameeyo | Blog-ka Fetish-ka ah
Francys Belle waxay qaadataa ciqaab cad
Nikki iyo Kitty duubista iyo sigaarka ...
Ilaa Dhamaadkii Dhamaadkii: Jureka Del Mar & Ch ...
Wargeyska GB ee Oyten - Qaybta 5 ee ...
Krystal Kaytlin iyo riwaayad Monika Wild ...
Calaashka daboolka cirifka. Wareysi dheraad leh
Wendy Moon oo ku guuleysatay tartanka tartanka ...
Ciyaaraha Ciyaaraha Ciyaaraha Kubadda Cagta ee Sara May iyo ...
Muujinta My Sweet Sweet By Model ugu sareeya Mirell ...
Julia Red iyo Francys Belle qoto dheer oo farsamo ...
Kinky kaadida oo kaadida, kufsi, feering leh My ...
Piss River Part 3 ee Wabiga London HD ...
Piss on Puking NURSE la DirtyBetty | F ...
Brittany Bardot oo laba jibbaaran leh
Hello iyo soo dhawow! Gudigaani wuxuu u heellan yahay dhammaan waxyaabaha PISSING. Haa, xarfaha waaweyn, sababtoo ah dhunkashada waa u qalantaa dhammaan noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'hype' waxa soo galaya labadii sanno ee la soo dhaafay. Haddii aad runtii ku raaxeysatid fiidiyowyada, waxaad ku raaxeysan doontaa xulashadan halkan. Waxaan samaynay cilmi-baariskayaga, waxaan ognahay sida fiidiyowyada cajaladaha aan lashaqaynin ay heli karaan. Taasi waa sababta aan u hubinay inaad ka heleyso content-top oo kaliya halkan. Ma jiri doonaan fiidiyowyo aan caado lahayn oo gabdhaha ah oo aan caddayn inaysan ku raaxaysaneynin habka loo duubo marka la jiidayo.
Maktabadkeena-maktabadda waa mid aad u weyn, waxaa kaa garaacaya adiga. Ugu horreyntii, waxaan leenahay fiidiyoow fudud oo leh haweeney jilicsan. Ma jiraan wax la mid ah, laakiin waxa kaliya ee uu sameeyo trick. Sida iska cad, waxaad ku raaxaysan doontaa daawashada haweenka haweenka, wax walbana waa ka duwan yihiin. Marka xigta, waxaan dooneynaa inaan ka hadalno fiidiyoowga jilidda dhalinyarada, kuwani waa kuwa ugu fiican. Dhallinyaradaani waa dhaliin yar yar, laakiin horeyba waa kuwo toosan oo aan laga fogeyn. Waxay jecel yihiin dhirbaaxo ama gaabis ah muddo dheer, waxay u muuqataa. Waxay u egyihiin inay sii wadaan dhalinyarada, tamarta iyo xushmadda. Sidaa daraadeed, fiidiyoowga jilidda dhalinyaradu waa talooyin xoogan oo naga soo kordha. Haddii daawashada da'yarta aysan aheyn koobka shaaha, waxaynu leenahay wax ka soo horjeeda dhinaca da'da ah: fiidiyoowga jimicsiga. Ma heli doontid gabdho yar oo fudfudud ah, kuwan waa MILF-iest of MILFs, cirbadoodu waxay u muuqdaan kuwo khibrad leh, kulul, marwalba qoyan iyo nooca loo isticmaalo, laakiin hab wanaagsan. Si aad u kulul, maskaxda ku hay. Isu-soo-ururinta suufka ee bislaanshaha ayaa loogu talagalay dhammaan dadka jecel dumarka nasiibka ah, haweenka wanaagsan iyo kaliya ma aha inay dhallinyarro yar-yar iyo wax aan loo baahneyn. Sidoo kale, haddii aad ka bilowdid kan ugu sareeya, laga bilaabo fiidiyowyada ugu da 'vanilla ah, sida jinsiga haweenka, waxaad si dhakhso ah u ogaaneysaa qaar ka mid ah fiidiyowyada kuleylka leh gabdhaha ku hareeraysan dibadda. Taasi waa wax weyn, dadku ma heli karaan in ku filan oo dibedda ku dhejiya, "sababtoo ah waa wax la mid ah oo xiiso leh, dhammaantood isla waqtigaas. Qaarkood waxay tixgeliyaan in ay noqdaan kuwo ciriiri ah iyo guud ahaanba, laakiin jahannadu waxay waydiisanayaan cirbadaha, ma sax baa? Waxaan runtii u maleyneynaa inaad ku riyaaqi doonto fiidiyowyada banaanka, dhammaantood waa cadowgooda hadda iyo sabab wanaagsan.
Waxay u muuqataa inay tahay waqtigii loogu talagalay farriinta kooban ee fariinta halkan oo aan ka wada hadalnay haweenka sawirada muddo wakhti isku dayay in ay careraan dhadhan kasta. Waad ogtahay, maktabadayagu waa mid aad u fiican, waxaanay kala duwanaaneysaa mahadsanidadeenna loo qoondeeyay. Kumanaan caruur ah oo kumanaan haween ah ayaa maalin walbana isticmaalaya fiidiyoowyo, maalinba maalinta ka dambaysa, waxaad heli doontaa marwo badan oo lacag la'aan ah maalin kasta oo aadan filaneynin inaad wakhti ku filan si aad u daawato qof kasta ama u gudubto baaxad weyn. Go'aamada-go'aannada.
Dhammaanteen, waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysan doonto joogitaankaaga. Dadkani halkan waa kuwo saaxiibtinimo leh, sidoo kale waa mid cajiib ah. Waa inaad isku daydaa inaad barato qaar ka mid ah iyaga, maxaa yeelay waxaad leedahay meel jilicsan oo wadnahaaga ah oo loogu talagalay dhunkashada laxanka. Dadku waxay jecel yihiin inay ka hadlaan waxyaabo, waxay jecel yihiin inay qayb ka yihiin bulsho faraxsan, qof walbana wuxuu jecel yahay dhibaatooyinka shakhsi ahaaneed / khibradaha / iwm. Sidaa darteed, waxaan run ahaantii ka rajeyneynaa inaad si raaxo leh uga qayb qaadato oo aad ugu raaxeysid dhammaan waxyaabaha aan qabowga lahayn ee aan heysano. Ha noqonin qof qalaad ah!
Blog-ka Fetish-ka ah > blog > clips > PISSING